टर्कीमा देखिएको समुन्द्री ‘सिँगान’ फामागुस्तामा पनि देखियो, के हुन्छ खतरा ? | Cyprus-Nepal.com
टर्कीमा देखिएको समुन्द्री ‘सिँगान’ फामागुस्तामा पनि देखियो, के हुन्छ खतरा ?
१० जुन २०२१/लिमासोल
टर्कीमा रहेको मारमरा समुद्रमा समुद्री सिँगान (सी स्नट) को फैलावट बढ्दै गए पछि समुन्द्री जीवजन्तुहरू संकटमा परेका छन् । बन्दरगाह, तटीय क्षेत्र र समुद्रको जललाई यो खैरो पदार्थ जम्मा भएको छ ।
यसले गर्दा सामुद्रिक प्राणीहरूको जीवन खतरामा छ । यसको प्रभाव टर्की शासित उत्तरी साइप्रसका तट मा पनि देखिएको मिडिया रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन्। उत्तरी साइप्रसका तट र फामागुस्ताको पाम बीच मा पनि समुद्री सिँगान (सी स्नट) देखिन थालेको छ।
टर्कीको इस्तानबुलको दक्षिणपट्टि समुद्रमा फैलिएको यो खतरनाक रसायनिक-जैविक वस्तु हो जसलाई समुद्री स्नट (Sea Snot), समुद्री थूक (Sea Saliva) या मरीन म्यूसिलेज पनि भनिन्छ।
उत्तरी साइप्रस को समुन्द्र तट मा देखिएको sea snot
यो क्रिम जस्तो चिप्लो र टाँसिने पदार्थ हो जुन सामान्यता नोक्सानदेह त हुदैन तर यसमा ब्याक्टेरिया, भाइरस जन्मने आशंका रहन्छ। यो दुइ मिटर गहिराइ सम्म फैलिने हुनाले यसको कारण समुन्द्रमुनि उज्यालो र हावा पुग्न पाउदैन जसले गर्दा समुद्री जीव मर्न थाल्दछन्।
यस्तो अवस्थामा टर्कीका वातावरणमन्त्रीले यसलाई छिट्टै हल गर्ने बताएका छन् । विपत व्यवस्थापन योजना बनाएर समुद्रको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने उनको भनाइ छ ।
वातावरणमन्त्री मुरात कुरुमले मारमरा समुद्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने, प्रदूषण घटाइने र तटीय शहर तथा जहाजबाट आएको फोहर पानी सफा गर्ने बताएका छन् ।
उनले सामुद्रिक सफाइ कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा, कलाकार र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । सफाइ मंगलवारबाट शुरू गरिनेछ ।
उत्तरी साइप्रसका सम्बन्धित निकायले समुन्द्रमा देखिएको पदार्थ बारे अनुसन्धान गरिरहेको स्थानीय पत्रिकाले खबर छापेको छ।
टर्कीस मिडिया रिपोर्टका अनुसार मारमरा सागरको तटमा यो समुद्री स्नट (Sea Snot), समुद्री थूक (Sea Saliva) जम्मा भएका कारण मानिसहरु समुन्द्र किनारमा गएका छैनन् भने पर्यटकहरुलाई पनि सो क्षेत्रमा जान रोक लगाइएको छ। मछुवाराहरु पनि माछा मार्न जान सकेका छैनन्। माछा मार्न प्रयोग हुने डुङ्गाहरु को मुनिको भाग मा यो पदार्थ टासिएकाले मोटर चल्न नसक्ने भएका छन्।
यस्तो घटना जलीय प्रदुषण र क्लाइमेट चेंज को कारणले हुने गर्छ यधपी पहिलो पटक भएको भने होइन। स्क्रिप्स इन्स्टिच्युट अफ ओशनोग्राफी का अनुसार यस्तो घटना सन् १९८९, १९९७ र २००० मा पनि भएको थियो।
भिडियो मा हेर्नुस ? Turkey’s ‘sea snot’ problem
शुक्रबार यी स्थानमा हुदैछ कोरोना र्यापिड टेस्ट
साइप्रस आज देखि २ हप्ताको लकडाउनमा, भरिदै छ अस्पताल
26/04/2021 NewsRoom 4